Shan Qof Oo Dil Loogu Xukumay Dilkii Wariye Jamal Khaashuqji – somalilandtoday.com
Shan Qof Oo Dil Loogu Xukumay Dilkii Wariye Jamal Khaashuqji
(SLT-Riyadh)-Shan qof ayaa dil loogu xukumay dilkii weriye Jamal Khaashuqji, hase yeeshee labadii qof ee ugu sarreeyey dadkii loo baadhayey dilkan ayaa dambi lagu waayey, waxaa sidaas Isniinta sheegay dacwad-oogaha guud ee Sacuudi Carabiya.
Illaa iyo hadda lama helin hadhaadiga jidhkiisa.
“Waxaan ogaanay in dilka Khaashuqji uusan ahayn mid horey loo sii qorsheeyey” waxaa sidaas yidhi ku-xigeenka dacwad-oogaha guud ee Sacuudiga, Shalaan al-Shalaan oo shir jaraa’id qabtay.
“Si kastaba, Qahtani ayaa baaritaan lagu sameeyey balse dacwado laguma soo oogin sababo la xidhiidha caddeymo ku filan oo loo waayey. Sidoo kale, Assiri ayaa la baaray laguna soo oogay dacwado, balse dambiga lagu waayey, kadib markii isna caddeymo lagu waayey” waxaa sidaas lagu yidhi bayaan kasoo baxay dacwad-oogaha.